FURSAD SHAQO: WFP XAFIISKA GAROOWE, Korontiiste (Electrical Engineer ) – Radio Daljir
Agoosto 15, 2021 5:45 g 2
Hay’adda barnaamijka cunnada adduunka ee Qaramada Midoobay (WFP), Xafiiskeeda Garowe, waxa ka bannaanjagoInjineerkorontada ah (Electerical Engineer), si uu taageero ugageesto mashaariicda ay WFP ka waddoSoomaaliya ee yaraynta iyo ladagaallanka gaajada.
Codsadaha booskan waxa laga doonayaa:
In uuleeyahay khibrad labo sano ah oo la xiriidha shaqadan.
In uu dhamaystay shahaadada heerka koowaad ee jaamacada oo ay weheliso khibrad shaqo.
Waa in uu aad u yaqaanaa qoraalka iyo ku hadalka Afka Soomaaliga iyo English-ka.
Cid kasta oo danaynaysa booskan, gaar ahaan gabdhaha waxa lagu dhiirrigelinayaa in ay codsadaan iyagaoo ka codsan kara website-kan www.wfp.org/careers, qaybtashaqooyinka.
F.G: Codsashada shaqadani waxa ay ku egtahay 25 bishan August 2021.
Contract type/grade Service Contract, SC-8
Duty station Garowe
Date of issue 12 August 2021
VA 045 2021-Electrical Engineer SC8 Garowe
Fursadaha 316 Wararka 26360
Warka Fiidnimo iyo Cabdirisaaq Cabddala Faamoos, Daljir Qardho (dhegayso)
Mohamuud Abdisalaan mohamed 2 months ago
Abshir mohamed farah 2 months ago
Waxaan ahay shaqaale ahna khibradiiste koronto 3sanaa dhigtay electric engineering sanadki afraad baan sababo dhaqaale kaga haray
Badalkii jaamacada waan wataa
U Jawaab Mohamuud Abdisalaan mohamed Buri halceliska